Mpizahatany any Algeria: Mitandrema amin'ny Mafia Payon amoron-dranomasina
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mpizahatany any Algeria: Mitandrema amin'ny Mafia Payon amoron-dranomasina
Leo ny antsoin'ny antsoina hoe Beach Umbrella Mafia ireo mpizahatany any Algeria, ary mitondra amin'ny media sosialy ry zareo.
Leo ny antsoin'ny antsoina hoe Beach Umbrella Mafia ireo mpizahatany any Algeria.
Manome elo amoron-tsiraka ny tanàna mba hampiasain'ny mpizahatany, fa ny sasany kosa nanangona ny elo mba hahafahan'izy ireo mandidy ny mpizahatany hanofa azy ireo. Ity fikorontanana ity dia misy fiatraikany ratsy amin'ireo mpizahatany izay mahatsapa fa voafitaky ny Umbrella Mafia.
Fantatra ve ny tanàna? Araka ny be indrindra, ny valiny dia eny, fa ny any ivelany kosa no jerena raha mbola tsy terena handoa ny elo ireo mpizahatany. Fa ho an'ireo mpizahatany vaovao any amoron-dranomasina sy ilay heverina fa nahafaly azy, ahoana no hahafantaran'izy ireo fa tsy mila mandoa vola izy ireo?
Tranga tahaka izao no mitarika ny mpizahatany handray ny media sosialy hampiharihary ny fomba fanaovana varotra. Niantso polisy ny mpizahatany, na izany aza, tsy nisy na inona na inona tonga tamin'ity fangatahana fanampiana ity.
Ny sehatry ny fizahan-tany any Algeria dia mety manana fari-dranomasina Mediteraneana, na izany aza, tsy dia be loatra raha tsy te-ho any ireo mpizahatany noho ny tahotra ny fanatonan'ny Beach Umbrella Mafia.
CIE Tours dia manome anarana anarana hoe manager new development of Northwest Business Development
Natolotry ny UNESCO ny toerana lova kolontsaina faha-18 ananan'i Japana